I-Galaxy Fold isungula ngoSeptemba kwaye nazi iinguqu ezikhoyo | Iindaba zeGajethi
IGolden Fold yaziswa ngokusemthethweni ngoFebruwari walo nyaka. Isamsung ke yaba yinkampani yokuqala kwintengiso ukusishiya neflip yefowuni. Inkampani iyenze yacaca iinjongo zayo zokuba ibe sisalathiso kweli candelo lentengiso, ke oku kuphehlelelwa yinto ebaluleke kakhulu.
Ukuphehlelelwa kwesixhobo bekucwangciselwe inyanga ka-Epreli, ukuphela kuka-Epreli kwezinye iimarike nakwezinye ngoMeyi. Ke iya kuba yifowuni yokuqala yohlobo lwayo ukuba isungulwe ezivenkileni. Kodwa kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba ikhululwe, izinto ngokucacileyo zihambe kakubi kule Galaxy Fold.
1 Ukuphehlelelwa kweGolden Fold kuyekisiwe
2 Qalisa ngoSeptemba
3 Luluphi utshintsho olwenziwe kwiGolden Fold?
Ukuphehlelelwa kweGolden Fold kuyekisiwe
Isamsung yenze isigqibo thumela iiyunithi zeGolden Fold kwiqela leentatheli kunye nefuthe kwihlabathi liphela. Umbono kukuba bangayivavanya ifowuni emva koko babhale ngayo. Kukule mvavanyo apho izinto ziqale ukungahambi kakuhle, njengoko iingxaki kwiscreen sedivayisi zafunyanwa. Ngokukodwa, ifowuni yesikrini. Abanye abantu bayisusile njengoko ingagubungelanga ngokupheleleyo isikrini kwaye bacinga ukuba ingasuswa.
Le yayiyimpazamo, ibangela kuya kubakho iingxaki kwiscreen. Kwakhona, kwezinye iimeko ezithile, isikrini seGolden Fold sasingaphenduli okanye saphukile. Kwakukho namathandabuzo ngendawo yehenjisi, kuba yayiqelelene kakhulu kwaye ivumela uthuli ukuba lungene ngokulula. Iindaba malunga nokusilela kwifowuni zikhokele i-Samsung ukuba yenze isigqibo sokurhoxisa ukumiliselwa kwayo kwaye ilibazise okwethutyana.
Ukulandela esi sibhengezo, i-Samsung yaqala ukusebenza kuthotho lweenguqu kwifowuni. Ifemi ivume kwizihlandlo ezimbalwa ukuba ifowuni ibingakulungelanga ukwaziswa, ukuba benze impazamo. Kwakunokwenzeka ukwazi ukuba loluphi utshintsho olwalukho kuyo, nangona ifemu igcinwe kwiimeko ezininzi ukuba wawungekho umhla wokusungulwa kwayo. Kude kube yile veki, xa beqinisekisile ukuba izakufikelela kwintengiso ngoSeptemba.
Kule veki i-Samsung ibhengeze oko IGolden Fold iya kuqala ukufika ngoSeptemba. Akukho mihla ithile inikiweyo kule nyanga, kwaye ayaziwa ukuba iyakuba kukumiliselwa kwehlabathi okanye ukuba iyakuqalisa kuqala kwiimarike ezimbalwa, ngaphambi kokuba yande kwamanye amazwe. Kubonakala ngathi ukhetho lwesibini lolona lubonakalayo, ekubeni bekukho amarhe kule veki malunga nalo.
Inkampani sele enze utshintsho olufunekayo kumnxaba. Enkosi kubo, ngoku sele ikulungele ukwaziswa ezivenkileni, isenza ukuba sibe sesona silindelo silindelweyo. Ngo-Matshi bekukho ixesha lokubhukisha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo, ezinje ngeSamsung. Xa kucinywe ifowuni, imali yabuyiselwa kubo bonke abasebenzisi abayigcinileyo.
Umbuzo ngowokuba ingaba abathengi basenjalo na unomdla wokuthenga iGold Fold. Ifemi isishiyile notshintsho, esiza kukuxelela apha ngezantsi. Nangona umfanekiso wakhe uchaphazelekile kwezi nyanga kwezi ngxaki. Baninzi bajonge ukumiliselwa kwale fowuni ngokukrokrela.
Luluphi utshintsho olwenziwe kwiGolden Fold?
Ezi nyanga zisebenze ukuze Isamsung yenze utshintsho kwifowuni. Eyokuqala, mhlawumbi eyona ibaluleke kakhulu, ibhekisa kwiscreen. Yenye yeengxaki ezinkulu zedivayisi, ethi kule meko isonjululwe ngolu hlobo lulandelayo. Imiphetho yalo mkhuseli ifihliwe phantsi komzimba weGold Fold. Ngale ndlela, kunzima ngakumbi okanye phantse akunakwenzeka ukuba abasebenzisi bayisuse.
Kwakhona, ukunqanda umngcipheko kule meko, iSamsung ikwazisa izilumkiso ezicacileyo nezibonakalayo. Ke kwibhokisi yayo nakwimiyalelo yayo iya kubonakala ngokucacileyo, eya kuthi ithintele abantu abaninzi ekususeni le plastiki yokukhusela kwifowuni. Ke iingxaki ezenzeke okokuqala ngesixhobo ziya kuthintelwa.
Olunye utshintsho olukhulu emnxebeni luye ukunciphisa umsantsa ophakathi phezulu nasezantsi kwehenjisi. Kuvavanyo lokuqala kunokubonwa ukuba oku kubangele ukungcola okuninzi kungene ngokulula kwifowuni, eyayingaphantsi nje kwesikrini, kunye nomngcipheko onokubangela iingxaki. Ke ifowuni kufuneka iqokelele uthuli oluncinci ngale ndlela. Ukongeza ekuphepheni iingxaki ezinokubakho xa usonge ngenxa yokuqokelela uthuli.
Inkampani iqinisekisile ngakumbi ukuba inayo Ihenjisi eqinisiweyo kunye neekepusi ezintsha zokukhusela kongezwe izaleko zentsimbi phantsi kwesikrini sale Galaxy Fold. Oku kukonyusa ukuqina kwescreen, ekufuneka sithintele iingxaki ekubeni zenzeke xa usonga. Kwelinye icala, kuthiwa uphuculo lwenziwe kwizicelo zamava omsebenzisi angcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IGolden Fold iya kuphehlelela ngoSeptemba, yiyo yonke into etshintshileyo
Yintoni ongayibona kwiNetflix, iMovistar + kunye ne-HBO ngo-Agasti